Kufadzwa kwezvipembenene - nei tichida dinosaurs yepamusoro
Kuchengetedza uye mari yezvikara zvakadai semhuka
Zvinoratidzika sokuti iine mhedziso yakakwana uye imbwa yekare kana kati yakabuda zvachose. Iye zvino muchiGermany mhuri dzinowedzera uye dzakawanda uye vana vedu iye zvino vanoda turtle, gecko kana tarantula.
Izvo zvatinongoti tinyengedze kuti tizununguse misoro yedu ndezvekusarudzo uye imwe nzira kune yekare yepamhuka. Hungu, mushure mezvose, une chikafu chakakosha muimba yako. Asi chikafu chinokodzera chaiye cheimba nevana kana zvachose?
Izvo zvinokambaira zvakakodzera sezvipfuwo zvevana here?
Zvinoshamisa, asi maruva kana marudzi akasiyana-siyana emaradhi anotifadza, zvichida nokuti vanotiyeuchidza nguva dzenguva refu dzakanganwika.
Mukuwedzera, ivo vakasiyana zvachose muhupenyu hwavo, vanoita zvakasiyana chaizvo nemhuka dzinozivikanwa uye vanoyevedzawo mukuonekwa.
Hongu, zvikara zvinoshamisa mhuka. Asi akafananidzwa semhuka? Uye nokuda kwevana?
Tinofanira kutenga reptile here?
Iwe usati wafunga nezvokutenga reptile, yakadai sekamonon kana gecko, unofanira kunge uchiziva zvimwe zvinhu.
Chokutanga, chikafu chinenge chisina kushanda mumasikirwo uye chichivhiringidza kwatiri. Kana iwe usingakwanisi kunakidzwa nekuonekwa kwezvinokambaira zvachose, hauzofari navo munguva refu. Zvinokambaira zvinongotama kana pane chimwe chinhu chokudya. Mumwedzi wekutsanya zvakanakisisa sekusaita zvachose.
Mamwe mhuka dzeshuga haatombofambidzani mita imwe pazuva uye kana zvakadaro, zvino chete kana tisingazvioni. Vana, kunyanya, vaifanira kunge vakakurumidza kudyidzana ne gecko yakashata.
Uine chikafu iwe haugoni kuvhara, kufamba kana kutakura. Uyezve, zvinokambaira hazvingambofi zvakakwezva kuvanhu. Iwe hauchazodi nguva uye simba kuti udzidzise hunyengeri huno, hahuchazodzidza.
Coloring page tsvina - Coloring page turtle
Uyewo, chikafu chinokanganisa hachina kumbova nechido chokuva pedyo kana kuti chida kufarirwa newe. Hazvitsvaki kutarira kwako. Pane zvinopesana, zvibvise kunze kwetrarium, zvichasimudzirwa uye hazvizombozive kuti hauri kuita chimwe chinhu.
Zvipembenene zvinodhura, uye kwete muchechi yekuwana. Mazuva ano magetsi anotengesa chero magetsi anopisa anofanira kuverengwa zvakare. Mukuwedzera, nzvimbo dzakanaka dzinodhura mazana emadhora emari, iyo midziyo uyewo zvokudya zvinogona kurohwa mwedzi nemwedzi neHNMX Euro.
Kana iwe usiri kunyanya kufarira nezvezvipembenene uye unongowanzovawana unofadza, haufaniri kutenga reptile. Mukuwedzera, zvikara zvemarudzi ose hazvisi mumaoko evana. Kunyange zvazvo turtle isinganyunyuti apo Hugo muduku achimutakura kubva muimba yekupinda kuenda mubindu, haazogoni kuchida.
Tsangadzi semhuka dzemhuka
Nyoka semhuka dzemhuka
Imbwa sezvipfuwo zvevana?
Pony semhuka | Pets
Hove semhuka dzemhuka
Zvipfuwo - Sei mhuka dzinokosha zvakadaro?
Golden hamster semhuka
Bhati rangu neni - zvinopfuura kungochengeta muviri chete
Nhau pfupi yevana - Chipfuwo se ...
Mazita anozivikanwa & Nzvimbo Munyika Yose